Amboary ny olan'ny fakantsary Windows - Andramo amin'ny Internet ny fakantsaranao ary tadiavo ny torolàlana hanamboarana azy
Amboary ny olan'ny fakantsary Windows
Andramo amin'ny Internet ny fakantsaranao ary tadiavo ny torolàlana hanamboarana azy
Fitsapana amin'ny Webcam
Ny Webcam Test dia mamela anao hizaha toetra ny fakantsaranao mivantana amin'ny tranokalanao. Manome torolàlana ihany koa izy io hanamboarana ny fakantsaranao amin'ny fitaovana maro ary miaraka amina fampiharana feo sy horonan-tsary.
Betsaka ny antony mety tsy mandeha ny fakantsarinao. Mety hanana olana fakan-tsary ianao raha tsy manana fikirana marina ilay rindranasa fampiasa fakan-tsary. Na mety tsy mandeha amin'ny fakantsaranao mihitsy ny fakan-tsary, na inona na inona fampiharana ampiasanao.
Aorian'ny fanombohana ny fitsapana, raha miasa ny fakantsarinao dia ho hitanao ao amin'ny mpizaha anao ny horonantsary izay nalain'ny fakantsary. Raha tsy mandeha ny fakantsarinao dia hahita hafatra diso ianao. Amin'izay dia azonao atao ny manamarina ireo torolàlana hanamboarana ireo olan'ny fakantsary manokana ho an'ny fitaovanao na ny fampiharana anao.
Miaraka amin'ny fanandramana webcam-nay dia voaro tanteraka ny fiainanao manokana: tsy misy data data alefa amin'ny Internet. Zahao ny fizarana "Tsy misy famindrana angona" eto ambany raha te hahalala bebe kokoa.
Torolàlana hanamboarana ireo olan'ny fakantsary sy horonan-tsary
Mitadiava torolàlana manokana amin'ny fisafidianana fampiharana sy fitaovana iray